လိမ့်မည် Marvel Must Haves သည် LEGO ကိုဖော်ပြသည် Marvel စုဆောင်းထားသော Minifigures စီးရီး?
18 / 01 / 2021 18 / 01 / 2021 ခရစ် Wharfe 1182 Views စာ0မှတ်ချက် 71026 DC စူပါသူရဲကောင်းများစုဆောင်းထားသောအသေးစား, အသက် 71029 စီးရီး 21, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Disney+, Hawkeye, Lego, Loki, Marvel, Marvel Haves ရှိရမည်, ဒေါ်။ Marvel, အဆိုပါစွန်ငှက်နှင့်ဆောင်းရာသီ Soldier, WandaVision, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?
Disneyအပတ်စဉ်အသစ် Marvel Must Haves စီးရီးများသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုပထမ ဦး ဆုံးကြည့်ရှုနိုင်သည် ကောလဟာလသတင်းများအရ Lego Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစား စီးရီး။
တူတာ မန်ဒိုတနင်္လာနေ့, အ စီးရီးအသစ် ပုံမှန်ထုတ်ကုန်နောက်ဆုံးပေါ်သို့ချည်ထုတ်ဖော်ဆောင်ခဲ့လိမ့်မယ် Marvel Disney+ ပြပွဲ။ ဒါပေမယ့်နေစဉ် Star Wars ညီမျှသော Mandalorian ရာသီ2ကြာချိန်သာပြေးခဲ့သည်, Marvel Must Haves သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွက်အပတ်စဉ်ထုတ်လွှင့်လိမ့်မည်။
ဆိုလိုသည်မှာ Lego ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ၏စာရင်းထဲတွင်အပါအဝင်, ပြီးသား - ထုတ်ဖော်ပြောဆိုအစုံ, မလွှမ်းခြုံနိုင်ဘူး 76175 ပင့်ကူ Lair အပေါ်တိုက်ခိုက်မှု, ဒါပေမယ့်အပြည့်အဝတစ်နှစ်ရဲ့ဌန်။ ဆွဲရန်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောနိဂုံးချုပ်မှာထိုအချက်ပင်ဖြစ်သည် Marvel Must Haves သည်နောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်တို့အားပထမဆုံးအနေဖြင့်ကြည့်နိုင်သည် ကောလဟာလသတင်းများအရ Lego Marvel စုဆောင်းထားသောအသေးစား စီးရီး။
As Brick Fanatics အစီရင်ခံတင်ပြ ယခုလအစောပိုင်းကစပိန်လက်လီအရောင်းကိုယ်စားလှယ်တစ် ဦး ကအနာဂတ်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုစာရင်းပြုစုထားသည် Marvel၂၀၂၁ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင်ဖြန့်ချိမည်ဆိုပါကမျက်မမြင်စာလုံးများပါသည့်ဇာတ်လမ်းတွဲများဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ပထမဆုံးစူပါဟီးရိုးဇာတ်လမ်းမဟုတ်ပါ။ စုဆောင်းထားသောအသေးစား 71026 အဖြစ်စီးရီး DC ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်ဇန်နဝါရီလတွင်စူပါသူရဲကောင်းများရောက်ရှိလာခဲ့သည် Marvel စကွဝဠာ။
အနာဂတ်ကာလအတွက်ရုပ်ရှင်ရုံများရပ်ဆိုင်းခြင်းနှင့်အတူ \_ t Marvel Must Haves ၏သတင်းများအရ၊ Disney+ ၂၀၂၁ ခုနှစ် WandaVision အပါအ ၀ င်တီဗွီအစီအစဉ်များ - ဇန်နဝါရီ ၁၅ ရက်တွင်ပြသခဲ့သည့်ပထမဆုံးဖြစ်စဉ်နှစ်ခုဖြစ်လျှင် Lego Loki, The Falcon နှင့် Winter Soldier, Hawkeye, Ms တို့၏လုပ်ငန်းများကိုလုပ်ဆောင်သည် Marvel သို့မဟုတ်လျှင် ... အကယ်၍ သူတို့ကတဆင့်ထုတ်ဖော်ပြသလိမ့်မည် Marvel ရှိရမည်
ကျနော်တို့စောင့်ကြည့်ပါလိမ့်မယ် Disney'' အပတ်စဉ်စူပါဟီးရိုးကမင်းကိုသတင်းပေးပို့တာ။ ဒါပေမယ့်မင်းကတမ်းတနေတယ်ဆိုရင် စုဆောင်းထားသောအသေးစား စောင့်လို့မရဘူး အသက် 71029 စီးရီး 21 ကနေမှာယူရန်ရရှိနိုင်ပါသည် LEGO.com အခုပဲ။
← တစ် ဦး LEGO နိုင်ဘူး Ideas National Winnie the Pooh နေ့အတွက်ကဒ်ပြားများကိုထုတ်ဖော်ပြသပါ။
နောက်ဆုံးပေါ် LEGO အတွက်သင်၏အသေးစားပုံများကိုလှုပ်ရှားပါ Ideas လှုပ်ရှားမှု →